March 2014 ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
1:15:00 pm Hacking 34 comments
100% လို့တော့ ပြောလို့မရဘူးဗျာ...90% လောက်တော့ အာမခံတယ်... အချိန်လည်း တော်တော်ယူရမယ်ဗျ...
ဒီနည်းအောင်မြင်ဖို့က...ရတာတော့ ရတယ်ဗျာ...hack လို့ရတယ်...90% အာမခံတယ်....
တစ်ခုတောင်းဆိုချင်တာကတော့ မလိုအပ်ပဲနဲ့ တခြားလူတွေကိုတော့ လိုက် အနှောင့်အယှက် မပေးစေချင်ပါဘူးဗျာ...လိုအပ်မှ လုပ်စေလိုပါတယ်...educational purpose only ပေါ့ဗျာ... :D
အဲ...လေကြောရှည်တာလည်း တော်တော်များသွားပြီ...စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ...ပထမဆုံး www.facebook.com ကိုသွားပါ...forgot password ကို နှိပ်ပါ...ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမယ်ဗျာ...
တကယ်တမ်းကြိုးစားမယ်ဆိုရင် facebook account ကို တစ်လအတွင်း ဟက်မယ် ဆိုတာ ဖြစ်နိူင်တဲ့လုပ်ရပ်နော်...
ကဲ...ဟက်နည်း ထိုးဖောက်နည်းကတော့ ဟုတ်ပြီ...ဒီနည်းနဲ့ကိုယ့်အကောင့်ကို မဟက်နိူင်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ???
facebook မှာ ကိုယ့်ကို friend request လုပ်လာပြီဆိုရင် အဲဒီ request အပေါ်မှာ ဘာတဲ့...Do you really know ...... on outsite? ဆိုလား ဘာဆိုလား အဲဒီလို သတိပေးထားတာလည်း အပိုမဟုတ်ပါဘူး...ဒီနည်းနဲ့ ထိုးဖောက်ဟက်မှာကို အထိုက်အလျောက်တော့ ဟန့်တားနိူင်လို့ပါ...ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်နဲ့ အပြင်မှာ တကယ်မသိဘဲ friend request တွေ add လာရင် အလွယ်တကူလက်မခံပါနဲ့....သေသေချာချာ စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီး လက်ခံသင့်မှ လက်ခံပါ လို့လည်း အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်....
တစ်ခါထဲ ကျွန်တော် သိပ်မရှင်းလို့ ဆွေးနွေးရဦးမယ်...facebook account ကိုဟက်လို့ ဘာများရနိူင်မလဲ လို့???????????
12:34:00 pm ဖုန်း No comments
ယခုဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ မြန်မာဘလော့ဂါတွေရဲ့ နည်းပညာဆိုဒ်တွေကို စုစည်းထားတဲ့ Apkဖိုင်လေး
ပါ။ နည်းပညာလိုက်စားသူတွေကတော့ Android Phoneတွေမှာနည်းပညာဆိုဒ် Apkတွေကို
ထည့်သွင်းပြီးလေ့လာနေကြမှာပါ။ ယခုဆော့ဝဲလ်ကို တီထွင်ဖန်တီးသူကတော့
စုစည်းတီထွင်ထားတဲ့ ညီလေးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းလေးစားပါတယ်။
Internet For Myanmar
ဘလော့ခရီးသည်- အစရှိတဲ့ နည်းပညာဘလော့ပေါင်း 12ခုပါဝင်ပါတယ်။ ညီငယ်ကောင်းခန့်ရဲ့ဆိုဒ်ကိုလေ့လာချင်ရင်တော့ http://internetformyanmar.blogspot.ru/
နည်းပညာစုစည်းမူ Apk Down ရန်
12:32:00 pm facebook No comments
✔Facebook v9.0.0.0.14 (Beta)for Android✔
version 9.0.0.0.14 တဲ့။
ထွက်​လည်းထွက်​နိုင်​တဲ့ Test Version ​တွေ။
ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​​ပေါ့၊Latest Updated ​တွေကိုမှ
ကြိုက်​တဲ့ ​ဘော်​ဒါများ စမ်းပြီး အသုံးပြုလိုပါက
တော်​​တော်​များများ အသုံးပြုလို့ အဆင်​​ပြေတာကို ​တွေ့ရပါတယ်​။
photo comment တို့၊video ​ဒေါင်းလုပ်​တို့၊
share တို့၊feeling တို့ စသဖြင့်​ အဆင်​​ပြေ
-Apk File Size 19MB ​ကျော်​ရှိပြီး၊
-Android OS Version 4.0 နဲ့အထက်​ဖုန်း​တွေ မှာထည့်​သွင်း install လုပ်​၍ အသုံးပြုနိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​-
-Android Version 4.0 ရဲ့​အောက်​၊v2.3.6 တို့ဘာတို့အစရှိတဲ့ဖုန်း​တွေမှာ​တော့ ထည့်​သွင်း install လုပ်​လို့မရနိုင်​ပါဘူး။version4​ကျော်​တဲ့
device ​တွေမှသာ အသုံးပြုနိုင်​မှာပါ။
ဒါ့​ကြောင့်​ ​ဒေါင်းလုပ်​မဆွဲမီ၊မိမိဖုန်းရဲ့ ဗားရှင်းနဲ့
အင်တာနက် အမြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် cFosSpeed_9.05_Build_2103_Beta
1:29:00 pm ဖုန်း No comments
ဒီ Cfos လေးက အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ပေးမယ့်
နဂိုကတည်းက လိုင်းမကောင်းတဲ့ လိုင်းဆိုရင်တော့သိပ်မထူးပါဘူး
ဒါပေမယ့် အင်တာနက်လိုင်း တစ်လိုင်းတည်းမှာ
user တွေ အများကြီးသုံးနေတဲ့အချိန် မိမိမှာ လိုင်းအပြည့်ရရှိနိုင်စေမယ့်
ဆော့ဝဲလေးပါ... Online Gamer တွေအတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့
File Size:5MB ပဲရှိပါတယ်
<a href='//ad.propellerads.com/ck.php?n=af1d485a' target='_blank'><img src='//ad.propellerads.com/avw.php?zoneid=&n=af1d485a' border='0' alt='' /></a>
<< ဒီမှာဒေါင်းပါ >>
Eposn Printer Stylus R230 ကို error ဖြေရှင်းနည်း
1:17:00 pm ပရင်တာရဲ့ counters ဖြေရှင်းနည်း2comments
Cbox ထဲကအစ်ကိုတွေ တောင်းထားလို့ နည်း(၂)နည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ကျွန်တော် ပရင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ သိပ်မသိဘူးဆိုတာ ကြိုတင်ဝန်ခံပါစေ.. ကျန်တာလည်း နည်းနည်းပါပဲဗျာ.. အများကြီးသိတယ်ရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး.. အခု ပေးတဲ့ နည်း(၂)နည်းထဲက ပထမနည်းက ကျွန်တော် လုပ်ဖူးတယ်ဗျ.. အဆင်ပြေပါတယ်.. ဒုတိယနည်းက မလုပ်ဖူးဘူး..
ဒီနည်း(၂)ခုစလုံးက ပရင်တာ မီးနီနှစ်လုံးလင်းတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းတဲ့နည်းပါ.. မီးနီနှစ်လုံးလင်းတဲ့ပြဿနာမှာ (၂)မျိုးရှိသတဲ့.. ဖြည်းဖြည်းချင်းလင်းရင် Absorber (သို့ ) မင်ခံပြည့်သွားတာလို့သိရပါတယ်.. ကျန်တာကတော့ အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာ.. စာရွက်ညပ်တာ၊ Head Sensor ပျက်တာ တို့ဘာတို့ပေါ့.. သိပ်လည်း မသိပါဘူး…. ကို sanmin ရဲ့ error နဲ့များ တူမလားပဲ..
ဒီနည်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲကို အောက်ကလင့်တစ်ခုခုမှာ အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ..
1. Epson R230 ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ပါဝါဖွင့်ထားပါ
2. ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ sscserve.exe ကို Install လုပ်ပါ.. အဲ .. ပရင်တာရဲ့ Driver တော့ရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာ… Install ကော လုပ်ထားရဲ့လား..
3. အခု sscserve ကို Run လိုက်ပါ..
4. ပေါ်လာတဲ့ ဘောက်ထဲက Configuration Tab ကိုနှိပ်ပြီး Printer Model ဆိုတဲ့ Option ထဲမှာ Epson Stylus Photo R220/R230 ကိုရွေးလိုက်ပါ..
5. ညာဘက်အောက်နားမှာ ပရင်တာပုံလေးကို Right Click ထောက်ပြီး Protection counter ထဲက Reset Protection Counter ကိုရွေးလိုက်ပါ.. ခဏစောင့်အုံးပေါ့…
6. ပြီးရင်တော့ ပရင်တာရဲ့ ပါဝါကို ပိတ်လိုက်ပြီး ၁၀ စက္ကန့်စောင့်ရပါမယ်..
7. အခု ပရင်တာရဲ့ ပါဝါကို ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ.. အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား..
ဒီနည်းအတွက် အောက်က လင့်(၃)ခုမှ တစ်ခုခုကနေ ဆော့ဝဲကို ဒေါင်းလိုက်ပါအုံး
1.ရလာတဲ့ Photo R220/230 ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို Run လိုက်ပါ.. ( မ Run ခင် ပရင်တာကို ကွန်ပျူတာမှာ ချိတ်ပြီး ပါဝါဖွင့်ထားဖို့မမေ့နဲ့အုံးနှော်)
2. ပေါ်လာတဲ့ဘောက်မှာ Accept ကိုနှိပ်ရပါမယ်..
3. ဒါဆိုရင် နောက်ထပ်ဘောက်တစ်ခု ထပ်ပေါ်လာပါမယ်.. အဲဒီဘောက်ထဲမှာ အောက်ကပုံမှာ ပြထားသလိုပဲ
Model Name မှာ Stylus Photo R230
Port Selection မှာ ကိုယ်တပ်ထားတဲ့ Port နံပါတ်.. ဒါက ပရင်တာ Driver တစ်မျိုးမက တင်ထားရင် ရွေးပေးရပါတယ်.. တစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ Auto Selection ကိုရွေးရင်ရပါတယ်..
Destination မှာ Asia ကိုရွေးပေးရပါမယ်.. ပြီးရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပေါ့..
4. ဒါဆိုရင် Adjustment ဘောက်ကိုထပ်ရောက်ပါမယ်.. အဲဒီမှာ Adjustment Tab ရဲ့အောက်က Maintenance ဆိုတဲ့ Tab အောက်မှာ Wast ink pad counter ဆိုတာကို အစက်လေးဖြစ်အောင်တစ်ချက်နှိပ်ပါ..
5. ပြီးရင် Appendix ဆိုတဲ့ Tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး Read ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ.. သူ Read ပြီးသွားရင်တော့ Reset ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
6. ခဏလေးစောင့်လိုက်ရင်တော့ Please Turn off your Printer ဆိုတဲ့ ဘောက်ကလေးပေါ်လာပါမယ်.. OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
ဒါဆိုရင် ပရင်တာကို ပါဝါပိတ်လိုက်ပြီး ၁၀ စက္ကန့်လောက်စောင့်လိုက်ပါ.. စောင့်ပြီးရင် Printer ကို ပါဝါဖွင့်ပြီး သုံးကြည့်လိုက်ပါတော့.. မီးနီတွေလည်းပျောက်.. ကာလာစာရွက်လှလှလေးတွေနဲ့ စမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာ..
REF : http://www.maungpauk.com မှကူးယူဖော်ပြထားပါသည်
1:15:00 pm ပရင်တာ ပြဿနာ 1 comment
Epson T60 အတွက် resetter တောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သုံးနည်းကတော့ လွယ်ပါ တယ်။ အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ပြထားပေးပါတယ်။ တစ်ခု နှစ် ခုလောက် သုံးပြီးသွားရင် resetter အားလုံးကို နားလည် သွားပါလိမ့်မယ်။ သိပ်မခက်ပါဘူး။
“Particular adjustment mode” button လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
“Waste ink pad counter” ကိုနှိပ်ပြီး ရွေးပေးပါ ပြီး “OK” ကိုနှိပ်ပါ။
Check ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ စာရွက်ထုတ်ထားပြီးတဲ့ % ကို ပြပါလိမ့်မယ်။ 100% ဆိုရင် ဆေးကုန်ပြီလို့ ပြပါတယ်။ ဆေးအပြည့်ရှိနေလည်း သူသတ်မှတ်တဲ့ အရွက်ရေ ထုတ်ပြီးရင် ဆက်ထုတ်လို့မရတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ ကျနော်တို့က အဲ့ဒီ့ ထုတ်ထားတဲ့ စာရွက်အရွက်ရေကို ၁ ကနေ စပြီး ရေတွက်ရအောင် resetter ကို သုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြတဲ့ printer မှာတော့ 20% ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
"Main pad counter" နှင့် "Platen pad counter" ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးလျှင် “Initialization” button ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အသုံးပြုမှတ်သားထားတဲ့ counter ကို
စပြီးတော့ program ကနေ reset လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
Ok ကိုနှိပ်ပေးပြီးတော့ printer ကို ပါဝါခလုတ်ကနေ ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် ပြန်ဖွင့်ပေးပါ။
ကဲပုံထဲကလိုမျိုး အသုံးပြု မှတ်သားခဲ့တဲ့ point နဲ့ % တွေအားလုံး0ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါဟာ reset လို့ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ အားလုံးပဲ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ။
Download Directmirror | mirrorcreator | solidfiles | One2up
Epson Tx210 resetter အသုံးပြုနည်း
1:09:00 pm ပရင်တာ ပြဿနာ No comments
ဒါကတော့ Epson Tx210 printer ကို counter reset ချတဲ့ နည်းပါ။ သုံးနည်းကတော့ လွယ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ရဲရဲသာသုံးပါ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ link ကနေသာ Download လုပ်လိုက်ပါ။ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ်။
ကဲ စပြီးတော့ program ကိုဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် Particular adjustment mode ကိုဝင်ပါ။ printer ကို ချိတ်ဆက်ထားပြီး ပါဝါဖွင့်ထားလို့လိုပါတယ်။Waste ink pad counter ကို ရွေးပေးပြီး ok ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာ တပုံကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ ပထမ ဒီ box ကို ရောက်လာရင် check ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင်သူ့အောက်က initialization ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပြီးပါပြီ ။အားလုံးပြီးသွားရင် printer ကို ဖွင့်ပြီးတော့ ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။
Directmirror | One2up | solidfiles | Mirrorcreator